U Fududeynta Suuro Galka Ah: Ma Dooneysaa In Kireystuhu Sameeyo Isbedel Waayo Waxa Aad Tahay Qof Naafo Ah | LawHelp Minnesota
U Fududeynta Suuro Galka Ah: Ma Dooneysaa In Kireystuhu Sameeyo Isbedel Waayo Waxa Aad Tahay Qof Naafo Ah
Reasonable Accommodations: Do You Need Your Landlord to Make a Change Because of Your Disability? (PDF)311.39 KB
Haddii aad tahay naafo oo kugu adag tahay in aad hesho guri ama aad heyso waxa aad kireeyaha weydiisan kartaa inuu ku sameeyo isbedel kuu fududeeya sidii aad halkaas ugu noolaan laheyd. Taas waxaa lagu magacaabaa “u fududeynta suurogalka.”
U Fududeynta Suuro Galka Ah
Sharcigu waxa uu dhigayaa in kireeyuhu sameeyo isbedelka suurogalka ah, sharciyada iyo nidaamka u dagsan ayaa u ogolaanaya in dadka naafada ah guryahooda si raaxo leg ugu noolaadaan. Laakiin isbedelkaas waa inuu noqdaa “mid suurogal ah.”
Isbedelku waa mid suurogal ah haddii uu yahay muhim, lacag fara badan aanay kaga baxeyn kireystaha oo aysan sabab u noqoneyn in isbedel qoto dheer lagu sameeyo ganacsiga kireystaha.
Tusaale U Fududeynta Suurogalka ah #1
Maria waxa uu jegeeda SSI soo gaaraa 3da bil kasta. Iyadu gacanta kuma heyso marka uu jeegeeda soo gaarayo. Maria waxa SSI loo siiyaa naafanimo darteed. Kireeyuhu waxa uu ka qaadaa lacagta la daahitaanka qof kasta oo lacagta kirada bixiya wixii ka dambeeya 1da bisha. Si ay Maria u hesho u fududeynta suurogalka ah waxa ay kireeyaha weydiisatay inuu u ogolaado bixinta kirtada ilaa 5ta bil kasta. Waxa kale oo ay ka codsatay in aan lacagta daahitaanka laga qaadin haddii ay kirada la dhaafin 5ta bisha. Kireeyuhu waa inuu ogolaadaa codsiga u fududeynta ee suurogalka ah.
Tusaale U Fududeynta Suurogalka ah #2
Betty dhawaanta ayaa waxaa laga helay cudurka isku buuqa. Ka hor intii aan xanuunka laga helin, shaqada ayey ka maqneyd dhawr jeer sababo la xiriira xanuunkeeda. Shaqada oo aysan ku wanaagsaneyn darteed, Betty waa laga eryay shaqada, mana awoodin bixinta kirada. Hadda waxaa diiwaanka ugu jira in guriga laga saaray.
Betty waxa ay raadineysaa hoy cusub. Waxa ay codsatay guri uu sharciga aanu goleyn in laga kireeyo qof horey guri looga saaray. Betty waxa ay weydiisan kartaa “u fududeynta suurogal ah.” Waxa ay kireeyaha weydiisan kartaa in sharciga wax looga bedelo maadaama guriga laga saaray ay u sabab aheyd xanuunka dhimirka ee ku dhacay.
Laakiin Betty waa in ay bixisaa balanqaad in ay raaciso heshiiska oo ay bixineyso kirada mustaqbalka. Taasi waxa ay cadeyn u noqoneysaa in ay xaaladeeda la socoto oo ay daawadeeda qaadaneyso ama ay waraaq ay ka keento madaxdeeda cadeyneysa in lagu kalsoonaan karo oo shaqada aysan ka maqnaan. Waxa kale oo ay dhigi kartaa lacag dheeraad ah oo dayactirka meel loo dhigo.
Sidee Ayaan Ku Ogaan Karaa In Aan Weydiisan Karo U Fududeynta Suurogalka Ah?
Ka jawaab su'aalaha soo socda:
Wax dhib ah miyaad ku qabtaa in aad hesho ama ku nagaato guri taasoo ay ugu wacan tahay naafanimo HAA / MAYA
Isbedelka aad weydiisaneyso ma kuu siinayaa fursad in aad guri hesho ama kaa caawinayaa in aad ku nagaato? HAA / MAYA
Ma u hogaansameysaa heshiiska kirada haddii isbedelka laguu sameeyo? HAA / MAYA
Isbedelka ka dib, ma hubtaa in dhaqankaagu uusan khatar ku aheyn hantida iyo nabadgelyada dadka kale ee dhismaha ku nool? HAA / MAYA
Haddii aad ku jawaabtay HAA dhamaan 4ta su'aalood ee kor ku xusan waad weydiisan kartaa u fududeyn macquul ah.
Sidee Ayaan Ku Weydiisan Karaa U Fududeynta Suurogalka Ah?
Haddii aad dooneyso in aad weydiisato u fududeynta suurogalka ah, haddii ay suurogal tahay waa in aad:
Codsigaaga qoraal ahaan ku soo gudbi oo nuqul (koobi) ka reebo.
Ku lifaaq wixii qoraal ah ama warqado ah oo tixraac ah oo aad ku cadeynta karto oo taageeraya codsigaaga.
Marka aad weydiisato u fududeynta suurogalka ah, kireeyaha ayey ku xiran tahay inuu ogolaado ama cadeeyo sababta aysan xiriir ula laheyn naafanimo.
Xusuusnoow, ma jirto jawaaab sax ah ama khalad ah su’aasha ku saabsan u fududeynta suurogalka ah. Ka fikir waxyaabaha aad weydiisan karto oo kireeyuhu ogolaan karo si aad guri u hesho ama u heysato. Waxaa lagaa doonayo in aad hal abuur la timaado.
Maxaan yeelayaa haddii aanu mulkiiluhu ii ogoleyn u fududeynta suurogalka ah?
Haddii aad ku jawaabtay HAA 4ta su’aalood ee kore oo aad soo gudbisay codsiga u fududeynta suuro galka ah LAAKIIN uu diido kireystahaaga inuu isbedel sameeyo, waxaa loo qaadan karaa in heyb sooc lagugu sameeyey.
Dakhligoodu yahay, dadka da'da iyo naafada ah ee Minnesota, soo wac xafiiska degaanka ee legal aid ama:
Waxa kale oo aad caawinaad weydiisan kartaa hay’adaha dawladda ee looga dacwoodo sharciyada heyb sooca guryaha Lacag la'aan ayey baaritaanka ku sameynayaan.
Wax kasta oo aad sameyso, dhaqso ugu dhaqaaq. Xaaladaha qaarkood, waxa aad u baahan tahay in aad cabasho ama dacwadaada soo gudbiso 1 ama mararka qaarkood 2 sano gudahood.